juin 2013 – filazantsaramada
IZAY ATERAKY NY NOFO
« Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy. » Jaona 3: 5b-6 Nahavaky loha ity raiamandreny be (i Nikodemosy) tokoa ny momba ny fahaterahana noresahin’I Jesosy taminy, indrindra fa noho ny maha efa lehibe azy. […]
Publié parfilazantsaramada juin 28, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IZAY ATERAKY NY NOFO
Tamin’ny taona 2010 no niantombohan’ny famokarana sy fandefasana amin’ny onjam-peo ny fandaharana «Henoy ny feony» vokarin’ny Feon’ny Filazantsara. Fandaharana ho an’ny tanora miendrika ‘interview’ ka entina indrindra hanehoan-kevitra, ary hijerena izay ambaran’ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana ny tanora. Onjam-peo tsy miankina telo eto Madagasikara no andefasana io Fandaharana io: (roa eto Antananarivo: ACEEM 103.4FM […]
Publié parfilazantsaramada juin 27, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur “Henoy ny feony”
« Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro. » IPet 5: 6b Raha izao teny izao no dinihina dia manana tànana Andriamanitra. Any amin’ny boky hafa dia manambara koa ny fananan’Andriamanitra sofina mahay mihaino antsika rehefa tsy misy efitra mampisaraka ny olona Aminy dia ny fahotana. Efa tia antsika hatry ny ela Andriamanitra, […]
Publié parfilazantsaramada juin 21, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY TANANA
“Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.” (Matio 10: 8b)
Raha tsiahivina fohy dia nanomboka tamin’ny taona 2002 no efa nisy fitsidihana voalohany nataon’ny FF teny amin’ny Fonjaben’Antanimora ary nihitatra teny amin’ny Fonja Tsiafahy. Niato kely izany ka ny taona 2007 dia nitohy indray ny teny amin’ny Fonjaben’Antanimora. “Volontaires” ‘ny FF (4) mianadahy no nanatanteraka ny asa Fitoriana. Nanomboka ny volana Martsa 2013 teo dia […]
Publié parfilazantsaramada juin 18, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur “Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.” (Matio 10: 8b)
“Izy no torianay” (Kolosiana 1: 28a)
Tanteraka soa amantsara ny 7- 8 May koa ny Fampiofanana faharoa “Fampitaovana ny olona masina” , izay natao teny amin’ny Masera MAMRE Sabotsy Namehana niarahana tamin’ny Synodam-Paritany Antananarivo Atsinanana (SPAA 12). Mpiofana 29, solontena avy amin’ny Fitandremana fito iandraiketan’ ireto Mpitandrina ireto: Rtoa Razanadravao Farasoa , Rtoa Razanamparany Vonimanitra , Rtoa Raharinomenjanahary M Lucie , […]
Publié parfilazantsaramada juin 14, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur “Izy no torianay” (Kolosiana 1: 28a)
ANIO NO FOTOANA
“Isika tsy maintsy manao ny asan’izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona”. (Jaona 9: 4) Sary iray mampahonena ihany no hita tao amin’ny trano fanangonan-tsary (‘musée’) iray, maneho fehezam-boninkazo ho an’ny olona maty (‘couronne’) izay mihantona amin’ny varavaran-kazo iray, ary mitondra izao soratra izao: “Izay tokony ho […]
Publié parfilazantsaramada juin 14, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ANIO NO FOTOANA